Ny fomba hitsena ny olona ao Paris-DBAG TAHIRIN-kevitra - Video firesahana amin'ny firaisana ara-nofo. Velona ny fampielezam-peo sy ny Fiarahana.
Foana aho manana soft toerana toy ny trano fisotroana ny Bowery trano fandraisam-bahiny, ny Rosebay Gramercy sy SOHO. Rehefa dinihina tokoa, Williamsburg dia TENTACULAR amin'ny olona, noho izany dia mila fotsiny mba mandeha any amin'ny zoma alina, maka-tongotra, ary manao ny safidy. Mba ho marin-toetra, tsy mbola nipetraka tany new York tamin'ny mandrakizay, mba ireo soso-kevitra mety ho kely lany andro.
Na ahoana na ahoana, miezaka aho mba hiara-hametraka ny tsara kokoa ny mpitari-dalana mba hifindra amin'ny.
Miala tsiny aho, fa tsy hifidy olona izay tsy mpanadala an-dalana. Parisy dia foana ny fitia ny hetsika, ny olona rehetra fantatro izay monina misy foana ny miresaka momba ny olona izay miezaka foana mba hahazatra ny miaraka amin'izy ireo, ary izaho efa niaina izany koa.
Salama, ny sipa, ary nandeha tany Paris
Nisy ihany olona ao Bastille izay natao ho zava-drehetra. Aho nandà aho satria nankahala ny toerana izay namako dia sambatra. Hatramin'ny fiandohan'ny fotoana ihany aho no eo amin'ny lafiny iray amin'ny vola madinika, ka ny olona dia tsy mitsahatra ny mijery ahy sy manao na inona na inona. Toy ny na inona na inona. Matetika aho no mandeha any Paris ny raharaham-barotra, noho izany, tsy mino aho hoe ho afaka mihaona amin'ny olona. Ary Eny, izy, indray mandeha ve nanery ahy hihaona olona amin'ny namany ny fitsingerenan'ny taona nahaterahan'i ny sakafo hariva, izy dia mifantoka tanteraka sy ny bureaucrat. Taty aoriana dia tsapako fa izy tena manambady. Ny adala no basse.
Noho izany, inona no tokony hataonao? Mihevitra aho fa Milan dia tsara ao amin'io heviny.
Mampiaraka toerana tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy video firesahana amin'ny aterineto tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana raha tsy misy fepetra ny tsara indrindra amin'ny chat roulette tranonkala ny lahatsary Mampiaraka online Chatroulette taona nalefa video internet tsy misy fisoratana anarana ny lahatsary amin'ny chat an-tserasera amin'ny zazavavy Chatroulette amin'ny zazavavy